Yazi Inguquko Engenamikhono Yokuphathwa Kwempahla Yakho
Izici » Inguquko engenamthungo
Dlulela eZeevou ngokuzikhandla ngangokunokwenzeka ngokuqeqeshwa kwethu kwe-premium kanye nokwesekwa kokushintsha.
Izinhlelo zokuhambisa azimnandi neze. Kunemininingwane eminingi ezodluliselwa ngaphesheya, futhi abaphathi beziteshi abaningi kanye ne-PMSes bakwenza kube nzima ukuthekelisa noma ukungenisa imininingwane.
Ukusetha izakhiwo kungaba nzima, ikakhulukazi ezindaweni ezinamayunithi amaningi, njengoba kungezona zonke izinhlelo ezinomqondo wesakhiwo esinezinhlobo ezahlukahlukene zamayunithi njengokuqoqwa kwamayunithi ngamanye. Lokhu kuholela ekudingeni kaningi ukufaka imininingwane eyimpinda yamayunithi afanayo.
Ngaphezu kwalokho, amasistimu amaningi awakuvumeli ukuthi udlulise imininingwane yakho yomlando yezivakashi ezikhona nokubhukha kwangaphambilini. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukwenza imibiko ezuzisayo ukuqhathanisa ukusebenza kwebhizinisi lakho ngokuhamba kwesikhathi, futhi ungahle ugcine usuqala ukwakha kabusha i-database yezivakashi kusukela ekuqaleni. Ekugcineni, ungahle uphoqeleke ukuthi wakhe konke ukubhuka okuzayo ngesandla, okungadla isikhathi esiningi futhi okujwayele ukwenza iphutha lomuntu.
Ngabe uZeevou usiza kanjani ukufeza uguquko olungenamthungo?
E-Zeevou siyaqonda ukuthi amasistimu wokuhamba angaba nzima kangakanani, futhi sizibophezele ekwenzeni lula le nqubo ngangokunokwenzeka, ngakho-ke sinikezela ngeTransmission Transition. Sihlose ukwenza ukuwela ngaphesheya kweZeevou kube yinto ejabulisayo, lapho ukuqeqeshwa nokushintshwa kuhlanganiswa.
Lapho ubhalisela noma uthuthukela ku-Premium Plan, umphathi ngamunye unikezwa iMenenja Yempumelelo Yozakwethu. Abaphathi Bokuphumelela Kozakwethu basebenza njengabaphathi be-akhawunti futhi bakhona ukusiza ngokusetha, kanye nemibuzo eqhubekayo noma imibuzo. Abaphathi bethu boPhumelele bozakwethu bonke bayatholakala nge-imeyili, nangengxoxo ye-WhatsApp. Abaxhasi bangahlela izingcingo ezi-1: 1 noma zilandele inqubo yokugibela, futhi sikujabulele kakhulu ukusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo.
Ngaphandle kokunikeza ukwesekwa kwe-premium, Ithimba lethu eZeevou futhi lithuthukise izici eziningi ukwenza ukudlula kwabanye abahlinzeki kube bushelelezi ngangokunokwenzeka. Isibonelo, ngesikhathi sokuxhuma ku-Airbnb naku Booking.com, i-Zeevou izongenisa ngokuzenzakalela konke ukubhuka kwakho okukhona okuzayo.
Noma ikuphi okunye ukubhukha okungokomlando noma ukubhukha okuvela kweminye imithombo kungangeniswa ngesici sethu sokungenisa ukubhuka ngobuningi. Ababungazi ngakho-ke bayakwazi ukufaka yonke idatha yabo yokubhuka kwifayela le-Excel bese bekungenisa lokhu njengefayela le-CSV / XLSX ku-Zeevou. Imvamisa, uhlu lwemininingwane eminingi edingekayo kulokhu lungathunyelwa kusuka ezinhlelweni ezikhona. Lokhu kuqinisekisa ukuthi usenokufinyelela kumlando wakho wokubhuka ngezinjongo zokubika. Ngaphezu kwalokho, iphrofayili yesivakashi yenziwa ngokuzenzakalela njengengxenye yenqubo, ngakho-ke awulahlekelwa yiminye imininingwane ebalulekile oyidingayo njengengxenye yakho Isihambi CRM.
Esinye isici esenza ukuthi ukungena ebhodini kube lula ezinkampanini ezinkulu zokuqashisa ngamaholide ukuqokelwa kwamayunithi afanayo ngaphansi kwezinhlobo zamayunithi, nezinhlobo zamayunithi ezitholakala kukheli elifanayo elingaphansi kwesakhiwo. Lokhu kugwema isidingo sokufaka imininingwane eyimpinda. Kwabaqhubi behhotela, i-aparthotel kanye nendlu yezivakashi, sithuthukise nesici sokudala amayunithi amaningi. Lokhu kukuvumela ukuthi udale wonke amayunithi ngaphakathi kohlobo lweyunithi ngokuchofoza inkinobho, ngokufaka izinombolo ezizenzakalelayo zeminyango yeyunithi ngayinye.
IZeevou ibuye ifike ilayishwe kuqala ngamathempulethi amaningi we-default kanye nemithetho yokuqalisa yababungazi, izivakashi nabasebenzi. Ngenkathi zihleleka ngokuphelele futhi ungasetha izifanekiso zakho nemithetho ye-trigger eyenziwe ngokwezifiso, lokhu kwenza kube lula ngawe ukuthi uqhubeke. Uma kwenzeka unezicelo ezikhethekile, sicela ungalindeli afinyelele kithi - sizokwenza konke okusemandleni ukubamukela.